साइकल चेन सयौं मानव मूर्तिकलाहरू गठन गर्न क्रिएटिव अनलाइन
युवा- Deok Seo एक दक्षिण कोरियाली कलाकार हो जो कलाको कार्यहरू बनाउन साइकल चेनका सयौं टुक्रा आफ्नो हातमा लिएको छ। एक कलात्मक अभिव्यक्ति जुन Seo एक निर्जीव वस्तुको साथ प्राप्त गर्दछ जुन सामान्यतया गाडीको अटोमोटिभ प्रणालीको रूपमा अवस्थित हुन्छ।
सयौं साइकल चेनहरू कि यथार्थपरक मूर्तिकलाहरू मानव शरीर को। विस्तृत जानकारीको साथ, त्यो शान्त निर्जीव वस्तु मानव अनुहार वा महिलाको धड देखाउनको लागि जटिल जाल गठन गर्न सक्षम छ।
तर त्यहाँ एक सन्देश छ कि युवा- Deok Seo को कलाकृति मा मुछिएको छ। यो हामी आफैं हो एक विशाल मेसिनको "एनिमेटेड" भागहरू। यदि हामी कम्पोनेन्टहरू हौं भने, हामी पूर्ण रूपमा एक अर्कामा टाँसिएका हुन्छौं ताकि विशाल मेसिन कहिल्यै बन्द हुँदैन।
र त्यो मेसिनको अंशहरू जस्तै, हामीलाई मुख्य पात्र हुन अनुमति छैन हाम्रो आफ्नै जीवन को। कलाकारको सन्देश जसले विश्वास गर्छन् कि औद्योगीकरण भनेको हाम्रो आत्माको शक्तिलाई घटाउने र हाम्रा भावनाहरू दबाउनको लागि हो।
यसको लागि यसले सबै लिन्छ साइकल चेनको ठूलो संख्या मानव रूपहरू पुन: सिर्जना गर्न जुन सन्देशलाई बोक्ने प्रयास गर्दछ जुन राम्रोसँग Seo को प्रत्येक मूर्तिकलाको साथ संलग्न छ।
को प्रदर्शन लन्डनमा ओपेरा ग्यालरीमा उनको काम अर्को तथाकथित "मानव जडान" वा मानव जडानको अंशको रूपमा। यो भोली हुनेछ जब प्रदर्शनी समाप्त हुन्छ।
तपाइँसँग पक्कै पनि Seo को काम व्यक्तिगत रूप मा साक्षी दिने अवसर छैन, हामी तपाइँलाई तपाइँलाई जनाउँछौं इन्स्टाग्राम, वेबसाइट y फेसबुक लागि आफ्नो प्रत्येक कार्यको अनुसरण गर्न सक्षम हुन.
Un निर्जीव वस्तुहरूमा मानवीय बोध जुन विशाल बहुमतले पूर्ण ध्यान दिएका हुन्छ र यसले अटोमोटिभ प्रणालीको भाग हुन बाहेक अरू केहि पनि सेवा गर्दैन। हामी तपाईंलाई साथमा छोड्दछौं मूर्तिकला बुझ्ने अर्को तरिका.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » साइकल चेनहरू मानवीय भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न
इन्फोग्राफिक, अधिक दृश्यात्मक रूपमा व्यक्त गर्नुहोस्